नमस्ते विनोद ज्ञवाली को
This blog is dedicated to Children, Teens, youth and their parents.
रामदेव बाबा पतन्जली स्टाेर र साेनपापडी
जेठ महिना , प्रचन्ड गर्मी , २०/३० जना अटाउने एउटा सानो हल। एयर कन्डीशन न भएको र हावाको लागि २ वटा सीलिग पंखा घुमी रहेका थिए । टेलीभिजन क्यामरा तयार पारिदै थियो । केही अासनी हरु बिछाइको थियो भुईमा । बीचमा तखत थियो सेतो कपडा ले छोपेको र त्यहां तखत मा पनि केही आसनी राखिएको थियो । सात आठ जना स्वयम सेवक यता उता गरि रहेका थिए । दृश्य हो - कृपालु बाग आश्रम को । केही समय को प्रतीक्षा पछि गेरुवा बस्त्र धारण गरेका, काठ को खडाउ लगाएर बाबा रामदेव को प्रबेश भयो । उनका पछि सेतो बस्त्रधारी अन्य दुई जना पनि थिए , आचार्य कर्मवीर र आचार्य बालकृष्ण । भी अाकार भनाै वा तीर आकार , बनाएर तीनै जना बसे । अगाडी बाबा रामदेव र संगै तर अलि पछाडी जस्तो मा दुबै आचार्य हरु । सधै झै बाबा घुंडा मारेर बसे र बायां हात घुंडा माथी राख्दै दाहिने हत्केला आकाश तिर फर्काए ......... यो बेला थियो उनकोे अनुलोम बिलोम प्रायाणाम को .....
....बाबा रामदेव को नाम आउंदा धेरै कुरा को सम्झना आउछ । .... आज भन्दा १२ १३ वर्ष पहिला..... भर्खर भर्खर बाबा रामदेवको कार्यक्रम टीभी मा आउन लागेको थियो । साझै बिहानै, जता ततै मानिसले दुबै हात का नङ घोटेको देखिन्थ्यो... कपाल कालो गराउन ।
थप पढ्न यहां क्लिक गर्नुहोस
Posted by Vinod Jnawali at 4:04 PM 1 comment :
Labels: sonpapadi , जीवन शैली , सम्झना ती दिन का
गुगल फाेटाेज के हाे र यस लाइ कसरी प्रयाेग गर्ने
गुगल फोटोज किन प्रयोग गर्ने
तपाईको मोवाइल मेमोरी फुल भयो ,फोटो ले भरियो । कता राख्ने <
ल्यापटप मा सार्ने <
कुनै दिन ल्यापटप पनि फुल भयो भने अनि के गर्ने <
बाहिर जांदा कहिले काही नागरिकता वा अन्य कुनै कागजपत्र लैजादा हामी पेन ड्राइभ मा लै जाने गछौ । मानौ पेन ड्राइभ खुलेन, अब के गर्ने <
खिचेको फोटोे तुरन्तै खोज्न परेछ । अब के गर्ने <
मानौ तपाई कुनैै पार्टी वा विवाह समारोह मा जानु भयो र त्यहां तपाई का साथीहरुले पनि आ आफ्नो मोवाइल मा फोटो खिचेका रहेछन । तपाइले खिचेको फोटो सबै सित शेयर गर्ने र उनी हरुले खिचेको फोटो पनि तपाइ सित साझा गर्नु परे कसो होला ।
यी र यस्तै समस्या को समाधान का लागि आउनुहोस सिकौं गुगल फोटोज
Posted by Vinod Jnawali at 5:10 PM No comments :
Labels: How to use google photos , वेब दुनिया
बफे सिस्टम.....एउटा अनुभव.
गत महिना एउटा विवाहको निमन्त्रणा आएको थियो । जाउ कि नजाउ भन्ने कुरा मनमा खेली रहेको थियो । निमन्त्रणा दिने मेरै पुराना साथी, त्यसैले जान त करै परेको तर चिन्ताको कारण थियो "बफे सिस्टम"
आधुनिक सभ्यता भन्दै धेरै कुरा हामीले आफ्नो जीवनशैली मा राखेका छौ । त्यस मध्ये एउटा हो "बफे सिस्टम"
मलाइ ती सज्जन, जसले निमन्त्रणा पठाउनु भएको थियो उहा लाइ त साह्रै शर्टकट भयो तर बिचारा पाहुनाहरु को कुरै न गरौं ।
बफे पार्टी हाे कि रणभूमि ......
- बफे पार्टी को दृश्य हेर्नुहोस, प्राचीन कालमा हुने कुनै रणभूमि भन्दा कम हुदैन । आयोजक रुपी सेनापति
को संकेत पाउना साथ, ढाल तलवार जस्ता चम्चा प्लेट लिएर भोकाएका सैनिक जस्तै किल्ला फत्ते गर्न सबै पाहुना "भोजन मंच" तर्फ आक्रमणको मुद्रामा ओहिरिन्छन ।
- प्लेट, चम्चा, डोंगा, डाडु सर्विस प्यान आदि सबैको समवेत स्वर ले युद्ध भैरहेको भान दिदैन र ?
- आ-आफ्ना प्लेटमा बिभिन्न परिकार राख्नका लागि सैनिकहरु जस्तै संघर्ष गर्दै गरेका पाहुनाहरु ।
- जसले त्यहा उपलब्ध बिभिन्न पकवान राख्न सके, ती सफल सैनिक र जसले सकेनन ती मैदान छोडेर टाढा जान्छन हारेका सैनिक जस्तै ।
मध्यकाल मा कुनै सुन्दरी लाई हासिल गर्न का खातिर कुशल र शक्तिमान फर्मुला लागु हुन्थ्यो त्यही फर्मुला यहां पनि लागु हुन्छ ।
- आफ्ना अगाडी राखेको सुस्वादु भोजन जति सक्छौ त्यति तान ।
- गोडा राम्रै सित जमाएर उभिनु , पछाडी का ले जति सुकै प्लेट चम्चा ले खैजडी बजाउन, आफ्नो प्लेटमा राम्रा राम्रा राम्रा मासुको पीस न आउदा सम्म डेग न चल्नु ।
बफेपार्टी खानु पनि यौटा कला हो ।
ती मानिस लाई कलाकार नै मान्नु पर्छ जसले बफे पार्टीमा पेटभरी टन्न खाएर निष्कलंक बाहिर निस्किन सफल हुन्छन ।
पहिला समस्या बफे मा यही हुन्छ कि जे हामी ले खाइ रहेको छौ, त्यसको नाम के हो ?
बिभिन्न ट्याग लगाएका ब्यन्जन लाई आफ्ना प्लेटमा राखेर जुन "खिचडी" खाइ रहेको
छौ त्यसलाइ के भनेर सम्बोधन गर्ने होला । म आफै कति उदार, खाइ रहेको तर के
खाइ रहेको थाहा छैन ।
धर्मनिरपेक्षता को उदाहरण ...
धर्मनिरपेक्षता को उदाहरण बफे भन्दा राम्रो के होला र ? चटनी रायतामा, राइतो दालमा, दाल पापडमा, पापड
मटन करीमा, मटनकरी रोटी मा रोटी पुलावमा, पुलाव मुर्गरोस्टमा र मुर्गरोस्ट चटनीमा । सबै चीजमा सबै
चीजको स्वाद छ तर पारखी ले मात्र भन्न सक्ने ।
हाम्रो शास्त्र र बफे....
हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ
- भोजन गर्दा शान्त भएर, आनन्द मन ले, निश्चिन्त भएर बस्नु पर्छ ।
- भोजन लाई चपाइ चपाई खाएमा चाडै हजम हुन्छ र स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तम मानिन्छ । तर बफे स्टाइलमा सबै कुरा उल्टो हुन्छ ।
- पहिलो कुरा, बफे मा मानिस शान्त नै हुन सक्दैन ,पहिलो त यही चिन्ता हुन्छ प्लेट कसरी भर्ने हो ? एक पटक कुनै परिकार लिन चुक्यो भने, चुक्चुकाउने मात्र हुन्छ ।
जसो तसो प्लेटमा स्तुपा बनाएर कुनै तरीकाले भीड लाई छिचोल्दै बाहिर आयौ । अब मानिस भेट भए कुरा त भइ हाल्ने भयो ।
कस्ता कुरा हुन्छन
नमस्कार..... सन्चै? ...,
-"यहा ब्यवस्था अलि राम्रै लाग्यो । जे होस भुटुवा त मिठो बनाएका रहेछन ।"
"भुटन ? कहां थियो ? मैले देखिन त ?"
"ओहो पाउनु भएन ?" "उ त्यहां रशियन सलाद को छेउमा जानुस जानुस ।"
आफ्नो प्रसन्न मन लाई बेचैन बनाउदै फेरी पसियो - त्यही
भीडमा "भुटवा" खोज्दै । आखिरकार भुटुवा को साटो
गोलभेडाको चटनी लिएर फर्के । मलाइ मृगतृष्णा
देखाएका मित्र बेपत्ता भएछन् ।
कता कता मन मा च्वास्स कांडा बिझे जस्तो भयो ।
कहां गए ती दिन आज तीस चालिस वर्ष पछि पनि सम्झना
आइ रहने । जहां निम्ता दिनेले आफ्ना पाहुना लाई कति प्रेमले
मीठो बोलीले स्वागत गर्दै प्रेम पूर्वक, "अलिकति त थप्न पर्छ"
भन्दै ख्वाउने गर्थे । कति विनम्रता । ख्वाउने र खाने परम्परा
को यस्तै रमाइलो वातावरण ।
तर, यस बफे भन्ने मा त कुन्नि किन हो , निम्ता दिने मानिस खुशी नभएको जस्तो लाग्छ मलाई । रिसाएर कतै गए जस्तै ।
पहिलो कुरा त उ देखिदै देखिन्न । क्याटरिगवालाले खाना लगाइ दिएका छन । मन लागे खानुहाेस मन छैन भने न खानुस ।
आधुनिक सभ्यता को यही बिशेषता हो - अरुको मर्यादा गर्न न थाल आफ्नो लक्ष्यमा अर्जुन दृष्टि लगाउ ।
अफिस जाने बेला जस्तै, कुनै माइक्रो वा टेम्पो आयो भने मानिस चढन दौडे जस्तै ।
-शिष्टाचार लोकाचार ले काम चल्दैन ।
-महिला प्रति वा कुनै ज्येष्ठ नागरिक प्रति धेरै शिष्ठाचार देखाउन थाल्ने हो भने भोकै बस्नु पर्ला , बस पनि छुटला भने जस्तै ।
-आफ्नो काम बनोस अरु जहां सुकै जाउन । यही हो आजको ब्यक्तिवादी सामाजिकता ।
बफे पनि यही "मोडर्न एज" को देन हो । यहां निम्ता दिने ले बफे को इन्तजाम गरि दिएको छ । अब तपाई को "तत्परता," "कर्मठता" र "आत्मविश्वास" को परीक्षा हो । आफ्नो प्लेट भर्ने हो । जसरी भए पनि- छल बल कौशल देखाउनु पर्ने बेला यही हो ।
तर कुन्नी किन हो यस्तो छल बल कौशल को सभ्यता ले मेरो मन आत्तिन्छ । यस्तो माया पनि के माया जहां मानिस लाई तछाड मछाड मा धकेलि दिन्छन ।
बरु सांझ घर गएर जाउलो खाउला तर पुराना साथी ले बोलाएको बफे पार्टी मा त जानै पर्यो भन्ने निर्णय गरे ।
आज लाई यत्ति...
एउटा अनुरोध :
यो लेख तपाई लाई कस्तो लाग्यो ? यसमा व्यक्त गरिएका विचार बारे तपाईको केही प्रतिक्रिया वा सुझाव भए, स्वागत छ ।
यदि तपाईलाई यो लेख मन पर्यो भने लाइक तथा शेयर बटनमा क्लिक गरी दिनुहोला , धन्यवाद ।
Posted by Vinod Jnawali at 4:05 PM No comments :
Labels: Life Style , मनोरंजन
देख्लान भन्ने चिन्ताले पिराेलेकाे मन.......
"२०० च्यानल छन ..तर मन किन रमाउदैन, आनन्द किन आउदैन ?
धेरै कुराहरु लुकांउदा लुकाउंदा हाम्रो मन मस्तिष्क मा यति धेरै बोझ पर्न लाग्यो र पनि हामीलाई यदि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्राब्लम वा थायराइड देखिएन भने चमत्कार नै मान्नु पर्छ ।
चिठी .....सबैका साझा
अाज जति बेला हामी सबै कुरा लुकाउदै छाै , एउटा युग त्यस्तो पनि थियो, जहां घरमा कुनै चिट्ठी आएको छ भने त्यो चिठीपत्र घर भरीका लागि सबैका साझा मानिन्थ्यो ।
Posted by Vinod Jnawali at 11:23 AM No comments :
Labels: Life Style , जीवन शैली , सम्झना ती दिन का
ती दिन... ती सम्झना ............कथा होल्डाल को
ती दिन... ती सम्झना ....
आज घरको स्टोररुममा सरसफाई गर्दा पुरानो जमानाको होल्डाल भेटाए । अचानक मलाई ४० बर्ष पहिला ती दिनको सम्झना आयो । आज तेसै को बारेमा केही कुरा शेयर गर्न मन लाग्यो .....
तेती बेला कतै यात्रा वा औषधी गराउन प–यो वा तीर्थ आदि जानु प–यो भने बाटोमा ओढने, बिछाउने, एक दुई वटा दोलाई सीरक, काम्लो इत्यादि सबै लिएर हिडने गरिन्थ्यो । फस्र्ट क्लास भएपनि रेलमा आफ्नो ओढने बिछाउने लिएर मानिसहरु हिडने गर्थे । ती सबै ओढने बिछाउने राख्नको लागि होल्डाल हुन्थ्यो । होल्डाल, घरमा न भएमा फलानोको घर छ भन्दै मागेर ल्याउने पनि गर्थे । नहुनेले चांही दरी, तन्ना को भएपनि गुन्टा भने बनाएर लैजाने गर्थे ।
Posted by Vinod Jnawali at 2:39 PM2comments :
Labels: Life Style , जीवन शैली , सम्झना ती दिन का , हाेल्डाल
वेलेंटाइन डे गिफ्ट - C Cleaner को बिजिनेस वर्जन डाउनलोड गर्नुहोस !
साथीहरु नमस्ते ,
कम्प्युटर किन्दा त नयां मोडेलको हाई फाई नै किनेको तर दुई तीन महिना मै एकदमै स्लो भएर हयांग हुन थाल्छ र केही समय पछि काम नै गर्न सकिन्न ।यस्तै कहिले काहि कम्प्युटर खुल्न मा नै धेरै समय लाग्ने, कहिले कुनै प्रोग्राम खोल्न खोज्दा चाडै न खुल्ने आदि समस्याले दुख दि रहेको हुन्छ । यो हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो । कम्प्युटर हयांग र स्लो हुने धेरै कारण हुन्छन । मुख्य कारण हामी ले काम गर्दा बन्ने टेम्परेरी फाइल, अनावश्यक र बिग्रेका रजिस्ट्री फाइल र मेमोरी मा डम्प भएका अनेकौ. प्रकार का सर्टकट र स्टार्टअप मा अनावश्यक प्रोग्राम हरु जो जबरजस्ती आएर बसेका हुन्छन ।
घर जति राम्रो भए पनि बढार्ने कुचो छैन भने चाडै नै फोहोरो भई हाल्छ भने झै तपाई को कम्प्युटर जति सुकै फास्ट भएता पनि क्लीनअप टुल छैन भने अधुरो नै मानिन्छ ।
Posted by Vinod Jnawali at 12:55 PM No comments :
Labels: download , Useful software , वेब दुनिया
आमाबाबु ले कुरै बुझ्नुहुन्न
पछिल्लो अंकमा मैले किशोरकिशोरीहरु सित अंतक्रिया गर्दा उनीहरुले उठाएका केही प्रश्न बारे चर्चा गरेको थिएँ . तेसैको कड़ी को रुपमा आज को लेख . यस बिषयलाई सामान्यतया जेनेरेशन ग्याप भनेर हलुका ढंगले लिने गरेको छ . तर जेनेरेशन ग्याप भन्दा पनी एक अर्काको भावना लाई बुझने प्रयत्न को रुपमा लिनु राम्रो हुन्छ होला .
आफ्नो कुरा बुझिदिउन भन्ने सबैको चाहना हो । यो स्वाभाविक हो । मानवीय गुण हो । तर आफुलाई राम्रो लाग्ने वा मनपर्ने कुरा आमाबाबुले मन पराई दिएनन भने कसलाई चित्त दुख्दैन र ?
र धेरै जसो परिवारमा किशोर किशोरी र आमाबाबू बीच यस्तै समस्या देखिन्छ ।
शनिवारको दिन । सौगातले म्युजिक प्लेयरमा एउटा नया लोकप्रिय अंगे्रजी पपगीत बजाई रहेको
थियो । मर्निगवाक बाट फर्केर बाबु घर आउदा के मूड चलेछ कुन्नी, एक्कासी तलैबाट
चिच्याए,“बन्द गर , एक बिहान यस्तो गीत । भक्तराज आचार्यको भजन बजाए हुदैन ? .....“।
परिणाम, बाजा पनि चुप, बाबु पनि चुप । उता छोरो भुनभुनाई रहेको थियो, “यही भएर घरमा बस्नै मन लाग्दैन“ ।
किन गर्छन आमा बाबु यस्तो ?
Posted by Vinod Jnawali at 10:38 PM No comments :
Labels: Applied Psychology , Life Style , जीवन शैली
नमस्ते विनाेद ज्ञवाली काे
A little effort to make easy to Next generation, through sharing some knowledge and experiences,because they deserve it.
Applied Psychology (2) Cinema ( 1 ) download (2) Entertainment (2) Good parenting ( 1 ) How to use google photos ( 1 ) Life Style (7) literature ( 1 ) Notice ( 1 ) poem ( 1 ) sonpapadi ( 1 ) Teenage Problems ( 1 ) tricks and secrets ( 1 ) umplayer ( 1 ) USB Disable ( 1 ) Useful software (3) Useful website (2) webpage to PDF ( 1 ) Women's view ( 1 ) आधुनिक उखानटुक्का ( 1 ) जीवन शैली (7) मनोरंजन (4) वेब दुनिया (7) सम्झना ती दिन का (4) सूचना ( 1 ) हाेल्डाल ( 1 )
को कहाँ बाट
pop up related post widget